Hay?ado iyo maamul is kaashaday oo howgal miino-baaris ah ka bilaabay miyiga iyo gudaha balanbale – Radio Daljir
Luulyo 16, 2013 3:47 b 0
Balanbale, July 16- 2013 – Deeganada ku dhow dhow degmaada Balanbale ee gobolka Galguduud waxaa ka bilowday howgal miino- baaris ah oo balaaran, kaasi oo hirgalay muddo ku siman 20-sano kadib ?markii ugu horeysay.
Maamulka degmada Balanbale ee gobolka Galguduud ayaa daaha ka qaaday in uu bilowday howgalkaasi oo ah ?mid ay qeyb ka yihiin Hay?ado ka shaqeeya soo saarista walxaha qarxa, Maamulka Balanbale, iyo dadka deegaankaas.
Rijaal Axmed Mxamed oo ah Madaxa arimaha bulshada ee maamulka Balanbale wuxuu sheegay in uu si rasmi ah u bilowday qorshuhu, iyadoo maamulka halkaasi ka jira uu haatan dadaal ugu jiro in gebi ahaanba la sifeeyo walxaha qarxa oo ku badan aaga deegaankaas.
? Khasaare kala gedisan ayaa ka dhasha, waxay ku qarxaan, dadka, gaadiidka iyo duunyada intaba, way dhintaan oo dhaawac ayaa ka dhasha, meel kasta way ku jiraan? ayuu yir Mudane Rijaal o saxaafada la hadlay.
Wuxuu sheegay mudane Rijaal in qorshaha looga gol-leeyahay howgalka miino-baarista uu yahay in gebi ahaanba laga ciribtiro deegaankaasc walxaha qarxa, deeganada ugu badan ee gobolka Galguduud ee ay ku jiraan qaraxyada aasan, waxaa ka mid ah Balanbale iyadoo halkaasi la geliyey miinooyin fara badan wakhtigii dagaalkii Ethopia iyo Soomaaliya 1977.
Baahin: Isniin, 15 July 2013, Caawa Iyo Daljir Weriye Macamed C Cali (Kooshin) ~ Daljir ~ Garowe